व्यापार मा सफलता यसको उचित निर्भर गर्दछ। दुवै प्रबन्धकहरू र कर्मचारीहरु यस्तो कागजी कार्रवाई कि सजग हुनुपर्छ। यसको सुविधाहरू के-के हुन् के प्रकार हो, र के नियमहरु कार्यप्रवाह को संगठनमा खातामा लग्नु गर्नुपर्छ?
के रेकर्ड व्यवस्थापन छ
कुनै पनि संस्था, स्वामित्व र विशेषताहरु बिना कागज को एक किसिम व्यापार को पाठ्यक्रम मा, सिर्जना गर्छ। यो आदेश दुवै र अक्षर, र रिपोर्ट हुन सक्छ। ती सबै संगठनात्मक र प्रशासनिक कागजात हौं।
कार्यालय काम - संगठन को कागजात सिर्जना गर्न एक गतिविधि, केही नियमहरू र आवश्यकताहरू प्रदर्शन। उद्यम सबैभन्दा अक्सर यस क्षेत्र मा समर्पित कर्मचारी, रोजगारी आवंटित। सानो कम्पनीहरु मा लगभग कुनै पनि कर्मचारी मा सचिव समारोह राखिएको गर्न सकिन्छ।
तपाईं शब्दावली (के कागजी कार्रवाई) को सार बुझ्न भने, यो स्पष्ट हुन्छ शब्द को मूल छ। यो सबै माथि, आधिकारिक जानकारी को एक सामाग्री क्यारियरमा fixation। यो प्रक्रिया चलिरहेको बेला सिर्जना , संगठनात्मक र प्रशासनिक कागजात पछि निश्चित कार्यहरू शुरू जो।
"पुरोहित" शब्द एक लामो समय को लागि देखा, तर केवल अन्तिम शताब्दीको बीचमा, आधिकारिक राज्य स्तर मा नियमहरु मा तय भइरहेको, आकृति लिए।
कार्यालय व्यवस्थापन र कागजात व्यवस्थापन - यो के हो?
संगठन व्यवस्थाको स्वतन्त्र अवस्थित गर्न सक्दैन। यसलाई सधैं एक रेकर्ड व्यवस्थापन र कागजात व्यवस्थापन हो। के के स्थानान्तरण कागज को सुविधाहरू, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्था गर्न, यो छ? Secretaries, archivists, कर्मियों विभाग को कर्मचारीहरु: यी मुद्दाहरू विशेषज्ञहरु द्वारा हल छन्।
व्यापार पत्राचार एक मूर्त मध्यम मा फिक्सिंग जानकारी, कागज वा विद्युतीय साधन सिर्जना पनि समावेश छ। आन्दोलन आदेश वा कार्यान्वयन गर्न आफ्नो सिर्जना देखि एक पत्र र अभिलेख वा विनाश पठाउने - यसको आधार मा कार्यप्रवाह संगठन निर्माण गरिएको छ।
कर्मचारीहरु र संगठन कागजातको व्यवस्थापन आदर व्यापार कागजात को ठाउँमा रूपमा बाह्य र आन्तरिक विभाजन गरिएको छ। स्रोत बाट बाटो अगाडी आदेश निर्भर हुनेछ, अक्षर।
आन्तरिक कागजात संगठन निम्न कदम समावेश:
परियोजना कागजात सिर्जना;
मस्यौदा कागजात साइन, मिति र तल राख्दै दर्ता नम्बर; दर्ता को क्षण देखि आधिकारिक प्रकाशित र कार्यन्वयनका लागि स्वीकार मानिन्छ;
अपराधियों र अनुगमन ल्याउन;
, भण्डारण लागि कागजातहरू समय र आवश्यकता आधारमा को कार्यान्वयन को दर्ता;
समयावधि समाप्त या संग्रह लागि तिनीहरूलाई डिजाइन संग व्यापार कागजातहरू को विनाश।
समान छन्, तर त्यहाँ केही मतभेद छन् एक पुरा को रूप बाह्य कागजात चरणमा:
कागजातहरू बाहिर बाट कम्पनी प्रदान। यो कागज अभिभावक र बच्चा, शाखा, आधिकारिक अधिकारी, अदालत आदेश, नागरिक बाट पत्र को अधिकारीहरु देखि नियमहरु हुन सक्छ।
सबै दर्ता प्रक्रिया undergo गर्न आवश्यक व्यापार कागजातहरू आयोजना मा प्राप्त। तिनीहरूले नियन्त्रणमा लिएको छन् भनेर पुष्टि गर्छ।
अर्को चरण कागजात, परिचय वा प्रदर्शन आवश्यकताहरु काम गर्न छ।
आवश्यक छ भने, एक औपचारिक प्रतिक्रिया बनेको छ।
पछिल्लो चरण - लामो वा अभिलेखीय भण्डारण, र अन्तिम विनाश मा चित्रकला।
साथै, संगठनको व्यवस्थापन आदर कागजातको प्रकार निम्न छन्:
उकालो - शासकहरूले (व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू) गर्न दास देखि;
तल - कर्मचारीहरु (आदेश) गर्न व्यवस्थापन देखि;
तेर्सो - बराबर स्थान (प्रेरित, प्रोटोकल) बीच।
कागजात सबै चरणमा गति मा विशेष पत्रिकाबाट लिपिबद्ध छन् छ। तिनीहरूले धेरै फरक तरिकामा गर्न सकिन्छ:
को रजस्टर आन्दोलन कागजातहरू;
विद्युतीय कागजात सबै भन्दा संगठनों को विशाल बहुमत मा साधारण छ।
अदालत कार्यवाही को सुविधाहरू
धेरै के कानुनी कागजी कार्रवाई आश्चर्य, र यो कुल भिन्न कसरी। अदालत मामला - यो कागजात र भौतिक प्रमाण एक अलि फरक सेट छ। उचित भण्डारण र आन्दोलन गर्ने न्यायिक प्रणालीको पारदर्शिता प्रदान गर्दछ। परीक्षण पुरोहित, संगठनात्मक विपरीत स्वैच्छिक हुन सक्छ। यो अधिकार व्यक्ति द्वारा आयोजित छ र कडाई नियन्त्रित छ। उहाँलाई लागि, नियामक र राम्रो अप विनाश गर्न सबै कदम परिभाषित।
को सचिव को कार्य
के कागजी कार्रवाई र कागजी कार्रवाई को कम्पनीको कर्मचारीहरु को सबै भन्दा धेरै अस्पष्ट विचार। व्यावसायिक गतिविधि - यो नै सचिव लागि।
सचिवालय उद्यमको आधारभूत कार्यहरु कागजात व्यवस्थापन। आकार र काम संगठन रेकर्ड पालन गरेमा सेवा कारोबारको सुविधाहरू यी प्रकार मा विभाजित छन्:
केंद्रीकृत - सबै Secretaries नै विभाग र विषय-मुख्य पुरोहित कामदार वा वरिष्ठ सचिव छन्।
Decentralized - विभिन्न superiors गर्न संगठन र विषय को भागहरु फैले आफ्नो कर्तव्य, प्रदर्शन Secretaries र कर्मचारी।
मिश्रित - यो सबैभन्दा ठूलो संगठन मा साधारण छ।
सुविधाहरू कम्पनी सीधा अपनाए सचिवालय के फारम निर्भर हुनेछ दस्तावेज।
आकार र स्वामित्व को फारम बिना कुनै पनि संगठन कागजातहरू को आन्दोलन विनियमन एक normative कार्य हुनुपर्छ। को के हो रेकर्ड व्यवस्थापन मा निर्देशन, र बनाउन कसरी? यो मुद्दा मात्र होइन Secretaries तर पनि नेताहरूले बीच चासो छ।
कार्यालय-काम निर्देशन - यो क्रम वा निर्देशन मैनुअल, सदैव कार्य द्वारा अनुमोदित संगठनको आन्तरिक नियम छ। यो कागजातको खण्डमा सबै चरणमा बाहिर spelled, जसको हस्ताक्षर आधिकारिक कागजात, प्रस्तुत डिजाइन नमूनाहरू, खाली र प्रकारका प्रमाणिकरण गर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट को सूची, छन्।
रेकर्ड पालन गरेमा
कागजात (200 भन्दा कम प्रति वर्ष) को एक कम स्तर संग सानो संगठन यो रेकर्ड पालन गरेमा कुनै प्रश्न छ। सबै सेना कर्मचारीहरु आफूलाई, वा टाउको निर्णय गरिएको छ।
रेकर्ड पालन गरेमा दायित्व प्रत्यक्ष कर्मचारी लागि हो र आफ्नो काम सम्झौता बाहिर spelled छैन भने, यो आफ्नो कार्य entrusting एक उर्दी जारी गर्न आवश्यक छ। यो कागजात विवरण थप जिम्मेवारी, जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति रंग गर्न पर्छ।
कर्मचारी रेकर्ड विशेषताहरु
आफ्नो संगठन एक कर्मचारी संचालित भने, तपाईं रोजगार कागजातहरू सिर्जना गर्नेछ निश्चित गर्नुहोस्। के मानवअधिकार आउटसोर्सिंग को प्रश्न, कर्मचारीहरु को एक सानो संख्या संग कम्पनीहरु लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
मानवअधिकार आउटसोर्सिंग - कर्मचारीहरु को रोजगार सम्बन्धित विशिष्ट कागजातहरू को आन्दोलन सुनिश्चित छ। कार्मिक विभाग - सामान्यतया, यी जिम्मेवारीहरू एक विशेष एकाइ द्वारा बाहिर। आफ्नो कार्य स्वागत, प्रशोधन र भण्डारण समावेश मानवअधिकार कागजातहरू। गोप्य छन् जो व्यक्तिगत डाटा को प्रक्रिया सहित।
कार्मिक कागजी कार्रवाई सामान्यतया गोपनीयता र भण्डारण सुविधाहरू को नियम संग समग्र अनुपालन देखि अलग सञ्चालन।
कार्यालय को अनुकूलन
डिजिटल प्रविधिहरू को तीव्र विकास भए तापनि धेरै संगठनों को कार्यप्रवाह अनुकूलन गर्न कठिन छन्। पुरानो जमानाको कागज पत्र नेतृत्व र नियमित लग सञ्चालन गर्न जारी छ।
यो कारण दुई कारक छ:
नवीनता उद्यम कर्मचारीहरु प्रतिरोध;
वित्त को कमी।
व्यवस्थापकहरू धेरै लगानी संग कार्यप्रवाह अनुकूलन एक महत्वपूर्ण दिन्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ आर्थिक प्रभाव।
रूसी संघ को normative कानुनी प्रेरित वर्गीकरणका। रूसी संघ को कानूनी प्रणाली
सेवा र बिक्री मा एक tripartite सम्झौता
को शहरी योजना दस्तावेज के हो?
Elie साब: सत्य महिला पालन गर्ने आत्माहरू
थैली सुनिंनु को लक्षण सम्झना छैन कसरी
पाठ DIY: इयरफोन कंगन
बेर फूल, तर यो सहन थिएन फल - के? किरा र रोगहरु बाट प्लम संसाधन
तपाईं कति वर्षका बच्चाहरु को लागि मशरूम खाना खा सकते हो? प्रयोग र सुझावहरूको विशेषताहरू
सुझाव hostesses - कसरी चकलेट ग्लेज खाना पकाउनु
गर्भावस्था को समयमा बीटी मापन राख्न मदत गर्नेछ
बेरोजगार - को बेरोजगार छ ... सामाजिक सुरक्षा। बेरोजगार